Ncp Archives - Dainik Online Dainik Online
प्रचण्डलाई विप्लवले सोधे-नेतृत्वबाट बाहिरिन तयार हो? एकताका लागि यी हुन शर्त
२ महिनाs अगाडि
‘नेपाल बन्द’ अभूतपूर्व सफल, मुल्यवृद्धि फिर्ता नहुन्जेलसम्म संघर्ष जारी रहन्छ: विप्लव
काठमाडौं । नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आज आह्वान गरिएको ‘नेपाल बन्द’ अभूतपूर्व रुपमा सफल भएको जनाएको छ। नेकपाका महासचिव विप्लवले पेट्रोलियम, खाद्य पदार्थलगायत अत्यावश्यक उपभोग्य सामग्रीमा
‘नेपाल बन्द’ बारे यातायात व्यवसायी-व्यापारीलाई विप्लव समूहको पत्र
काठमाडौं। विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले घोषित बन्द कार्यक्रममा सहयोग गर्न यातायात व्यवसायी लगायतलाई आह्वान गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थलगायत अत्यावश्यक वस्तुमा गरेको मूल्यवृद्धिविरुद्ध यही कात्तिक ३० गतेका लागि बन्द आह्वान
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबृद्धिविरुद्ध विप्लवद्वारा बन्दको घोषणा
काठमाडौं। नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि विरुद्ध नेपाल बन्द लगायतका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। महासचिव विप्लवले विज्ञप्ति जारी गर्दै पेट्रोलियम तथा खाद्यबस्तु जस्ता अत्यावश्यक बस्तुमा सरकारले निरन्तर
सुदूूरपश्चिम अर्थ राज्यमन्त्रीका पिएसओ मृत फेला
काठमाडौं । सुदुरपश्चिम प्रदेश स्थित मन्त्रीका एक पर्सनल सेक्युरिटी अफिसर (पिएसओ) मृत अवस्थामा फेला पारेका
राष्ट्रिय सभा निर्वाचन: विजयी कसले कति पाए मतभार?
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन २०७८ को अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गरेको छ। १९ रिक्त
भौतिक कक्षा सञ्चालन गर्ने कपिलवस्तुका दुई प्राचार्य पक्राउ
कपिलवस्तु ।कोरोना नियन्त्रणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुको आदेश उल्लंघन गर्दै भौतिक कक्षा सञ्चालन गर्ने
भगौडा कैदी परियार पुर्पक्षका लागि कारागार चलान
दाङ । घोराही कारागारबाट भागेको एक महिनापछि पक्राउ परेका कैदी यमराज परियारलाई अदालतले पुर्पक्षका लागि
देउवाका पुराना साथी पहिलो पटक सांसद बने
दाङ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका विद्यार्थीकालका राजनीति समकक्षी पहिलो पटक सांसद बनेका छन्। देउवाका समकक्षी
राष्ट्रिय सभा चुनाव: एमालेले ८ मध्ये ७ सिट गुमायो
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि आज भएको १९ पदको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको
१९ मध्ये १८ सिटमा गठबन्धनका उम्मेदवार विजयी, एमालेले एक सिट मात्र जित्यो
काठमाडौं । बुधबार सम्पन्न राष्ट्रिय सभाका १९ सिटको निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणा सार्वजनिक भएको छ ।
एपिएफ फुटबल क्लब १४ वर्षपछि ‘आहा! रारा गोल्डकप’को फाइनलमा
सशस्त्र प्रहरीको एपिएफ फुटबल क्लब ‘आहा! रारा गोल्ड कप’ फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ।